HANUUNKA QOF WALBA SABAB AYUU ILAAHAY U YEELAY ANIGA GABADHAYDA YAR AYAA HANUUNKAYGA SABAB LOOGA DHIGAY | Wacyigelin's Blog
HANUUNKA QOF WALBA SABAB AYUU ILAAHAY U YEELAY ANIGA GABADHAYDA YAR AYAA HANUUNKAYGA SABAB LOOGA DHIGAY
Posted on Luulyo 5, 2010 by wacyigelin
Waa sheeko dhab ah ee ku dhacday nin Soomaali ah oo asagoo aad u da’ yar ka haajiray dalkiisa hooyo kuna dhex wareegay muddo waddamada galbeedka Afrika ilaa uu xaas ka yeesho. Asaga ayaa ka sheekaynaya sheekada uu soo maray; wuxuuna u soo bandhigay sidan:
Anigoo aad u da’ yar ayaan ka haajiray dalkayga hooyo una haajiray dalal kale ee Afrikaan ah. Intaan ku jiray safaradayda waxaan soo maray dhibaatooyin aad u fara badan oo iskugu jira xarig, gaajo, iyo weliba hoy la’aan. Waxaan maray dalal aad u fara badan oo Afrikaan ah. Meel walba oo aan tagana waxaan ku arkayey Soomaali sidi aniga iska socota iyo kuwo iyagu degan dalalkaas ama ganacsi ha ku lahaadeen ama ha u shaqeeyaano ururo caalami ehe. Marki iigu yaabka badnayd waxay ahayd markaan arkay toban iyo saddex dhalin yaro Soomaali ah ee wada socda kuwaas oo ii sheegay inay ka yimaadeen dalkaasi Chaad. Waxaan ku kulanay nimankan dalkaasi Kameruun innagoo dhamaanteena usoo wada martiyaynay nin Soomaali ah oo u shaqeeya Raabidada caalamka Islaamka. Runti si hagaagsan ayuu inoo soo dhoweeyay ninkaasi balse marki qaar naga mid ahi ay ku kaceen falal aad u xun ee nagu diray maamulki magaalada ayaa ninkan go’aansaday inuu na yiraahdo waxaan idin siinayaa wax aad ku jid martaan ee doorta meesha u dhaqaajinaysiin kadib markuu xabsiga naga soodaayey. Waxaa uu naga reebtay nin dhalin yaro ahaa oo noogu yaraa aanna dhihi karo waa inoogu akhlaaq badnaa. Runti qabiil dartiis uma reebin asaga ee wuxuu ka eegay yaraaantiisa iyo weliba asagoo ahaa nin aad u degan. Hadii la yiraahdo qabiil aniga ayaa ka xigay ninkan uu reebay. Mar danbe ayaan ninkan sidaa noo soo dhoweeyay kulanay iina sheegay inuu ninki uu naga reebay uu u dhoofay Maraykanka. Waxaan go’aansanay inaan aadno dalkaasi loo yaqaano Africada dhexe ee magaala madaxdiisu tahay “Bangui”. Markaan xuduudda ku dhowayn ayaa qaar go’aansadeen inay u dhaqaajiyaan dhankaas iyo Kongo Brazzaville iyagoo ku sii jeeda Kongo Kinshasa.
Annagoo shan ah ayaan gaarnay “Bangui” oo haddana saddex kale naga tageeen iyagoo ku sii jeeda Suudaan. Aniga iyo nin kale ayaa isku soo harnay. Ninki kale wuxuu isu dhiibay UN-ta oo dalbaday in Soomaaliya loo celiyo balse anigu waxaan go’aansaday inaan meeshaas ku noolaado. Waxaan shaqo aan sidaa u qiimo badnayn ka helay dad dukaamo leh oo aan dukaamada u waardiyayn jiray habeenki. Waxaan meeshaas ku bartay dhalinyaro Suudaan u dhalatay oo shaqooyinka noocan ah sida badan qabta. Waxay ila dejiyeen laba nin oo kale oo aan ijaarka iyo raashinkaba qaybsan jirnay. Runti waxaa ii bilaabatay nolol yara degan oo orodki faraha badnaa ka raystay. Marki aan muddo shaqaynayey oo aan aruursanayey lacagti aan shaqaystay ayaa hal mar shaydaan ii gacan haatiyay. Ilaa nin dhalinyar ayaan ahaye waxaan raacay hawadayda taasoo marki danbe ilaahay iga bad baadiyay.
Waxaan bilaabay inaan Qamriga cabbo gaar ahaan kiisa rikhiista ah. Waxaa aad iigu adkaaday shaqadi oo aan noqday nin gebay shaqadiisi. Maalinki danbe ayaa lay digay oo laygu yiri hadii aadan wax ka bedelin sida aad wax u waddo shaqada waa lagaa cayrinayaa. Runti shaqadana waa jeclaa qamrigana waa jeclaa sidaas darteed ayaan bilaabay inaan jadwal toosan u sameeyo labada dhinac isuna dheeli tiro.
Waxaan qamrigi u bedelay galabti si aan u seexdo dabadeedna habeenki markay saacadu tahay sagaalka aan shaqada u tegi karo. Waa shaqeeyay qorshehaygi oo sidaas ayaan muddo ku jiray. Waxaa n bartay dad fara badan oo muslimiin ah oo ka ganacsada waddankan oo qaar aan aad u saaxiibnay. Dadkan qaar ayaa aad ii waanin jiray iyagoo arka da’dayda yar iyo weliba jidka xun ee aan ku joogo. Anigoo arintaydi iska wata ayaa maalin waxaan la kulmay gabar u dhalatay dalka Nayjeeriya gaar ahaan qabiilka howsaha oo muslim ah. Runti aad ayay u qurxanayd una edeb badnayd. Waxaa dhalay gabadha Xaaji maalqabeen ah oo suuqa dukaano kuleh dibadana wax ka keeni jiray. Gabadhi ayaan ka daba wareegtay muddo oo aan marki danbe ka dhameeyay inaan guursado. Waa ay iga ogolaatay laakiin igu xirtay inaan qamriga iska dhaafo. Marki hore waan ka yeelay laakiin markaan isla aqal galnay ayaan bilaabay inaan la dhuunto qamriga ilaa aan marki danbe qarsan waayey. Waxaa dhacday inay gabarti uur yeelatay ee ay ii dhashay gabar. Waxaa marki danbe ila hadlay gabadhi aan qabey aabeheed oo igu yiri, “gabadhayda waxaan kugu siiyay wanaag iyo islaamnimo marka waxaan kaa codsanayaa inaad si hagaagsan u dhaqatid hadii kale aad iska furtid.” Runti aad ayaan u murugooday laakiin arintu farahayga waa ka baxday oo qamriga ayaa i xukumayey ee anigu ma xukumaynin. Si kastaba ha ahaatee waxaan ku dadaalay inaan shaqaysto oo aan biisho xaaskayga iyo gabadhayda yare e ii dhalatay. Xaaskaygi ayaa haddana uur yeealaty iyadoo ii dhashay gabar kale. Waxaa igu dhashay fikir ah cidda ilmahan korin doonta hadii tii alle ii timaado iyo weliba hadii ay arki doonaan dalkoodi hooyo. Qamrigi waa cabbi jiray laakiin sidi hore waa ka yareeyay.
Labadaydi gabdhood tii waynayd ayaa waxay gaartay saddex sano. Waxaan aad ugu dadaalay inaan AfSomaaliga baro oo aan runti ku guulastay. Aad ayaan u jeclaa caruurtayda iyo xaaskaygaba. Waxaan la ciyaari jiray gabdhahayga markaanan shaqaynaynin. Waxaan helay marki danbe shaqo tii hore ka wanaagsan kana dakhli badan. Waxaan aruursaday lacag anigoo ku fikirsan inaan aniga qudhigaygu bilaabo ganacsi aan leeyahay. Iyadoo aan iskaga jiro qamri cabwogaygi iyo riyo ii timaada markaan qamriga cabo ee itusisa inaan taajir wayn noqonayo ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday arin noloshaydi aad wax uga bedeshay oo aan ilaahay uga mahad celiyo had iyo jeer.
Maalin maalmaha kamid ah ayaa anigoo cabsan waxaan kor u qaaday gabadhaydi waynayd oo aan daanka ka dhunkaday. Markaasay inta qunfacday igu tiri, “Aabe afkaada xaar ayaa ka soo uraya.” Runti wax aan ku jawaabo ayaan garan waayey markaasaan inta iska dhigay gabadhi ku iri, “Aabe waan iska soo dhaqayaaye hooyadaa la sii joog.” Inta baxay ayaan cadayaday, qabaystay lana soo baxay dhar nadiif ah una dhaqaajiyay dhinacaas iyo masaajidka oo casirka jameecada la dukaday. Habeenki waxaan ilaahay baryayey saacado inuu iga badbaadiyo dhibaatadan aan ku jiro. Waxaa I aragtay xaaskaygi oo igu tiri, “ isbedel ayaan kaa arkaaye maxaa ku helay.” Waxaan uga sheekeeyay sheekadi ina dhexmartay aniga iyo gabadhayda yar iyo in laga yaabo inuu ilaahay hanuun iigu soo raro. Runti xaaskaygu aad ayay u faraxday oo arinti gaarsiisay aabeheed. Marki aan laba usbuuc joogay oo aanan qamri cabin ayaan ogaaday inaan ka badbaaday dhibaatadi aan ku jiray. Sidaas ayaa ilaahay hadalka gabadhayda yar iigu soo raray hanuun sababna uga dhigay badbaadidayda aan ka badbaaday cudurada kan ugu daran mid kamid ah.
Markaas kadib waxaan laba laabay shaqadaydi oo sameeyay lacag ii ogolaatay inaan furto ganacsi aan anigu leeyahay. Waxaan furtay dukaan marki danbe aan ka furay dukaamo kale. Waxaa meesahaas igu soo maray Dahlin yaro Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo qaar ay aniga ii shaqeeyeen qaarna horay u sii socdeen. Waxaan marki danbe ku biiray dadka dheemanta qoda oo aan iyadana lacag fara badan ka helay. Waxaan furtay saydaliyad lagu iibiyo daawooyinka oo aan aad faaiido fiican uga helay.
Aqristow, marki ay sheekadi sidaas marayso ayaan waydiiyay ninkan Soomaaliga ah waxa uu kula talin lahaa dhalinyarada Soomaalida ah ee qurbaha u haajira. Jawaabti uu bixiyayna waa sidan:
Horta anigu anigoo ka mid ah dadka qurbaha u haajiray weliba qurbaha meelaha ugu dhibka badan ayaan waxaan kasbaday khibrad aad u fara bdan. Waxaan kula talin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay iska dhaafaan haajiridda maxaa yeelay mar walba wax ayaa kaa maqan hadii aadan waddankaada joogin. Hadii ay haajirayaan ha u haajiraano inay wax soo bartaan dabadeedna ha kusoo noqdeen wadankooda. Wax walba oo aad ka samayso waddan kale iyo heer kasta oo aad ka gaarto nolosha ka jirta meeshaas weligeed ma gaarayso tii aad ku haysatay dalkaadi hooyo. Waxaad ogaatiin nolosha qofka biniaadamka ah waxaa qiimo u yeela dadka ay isku dhaqanka yihiin, isku diinta, iyo luqadda yihiin. Waxtartkaadu wuxuu si hagaagsan ugu muuqdaa dadka garan kara oo keliy waa dadkaadee.
WIXI SU’AAL AMA FIKRAD AH KU SOO GUDBI wacyigelin@yahoo.com
Waxaa soo diyaariyay soona gudbiyay maamulka WACYIGELIN.
« KANAAN IYO HEESTI WAVING FLAG: THE VERSION I LIKE QOLABAA CALANKEEDU WAA CAYNOO: HEES »
Wadani dhab, on Maajo 19, 2011 at 716 said:
A.w.w. Wala adbad ugumahadsantihin taladad nasisan marwalb runti adbad ugaqiroday qisadas kudhacay walalkayga somali wlh mel kastod adunka katagto sikastoy nolashada her ugarto magarto tulo kamid ah cidada hoyo qofki qurbe arkay badaremikara siba Africada dhexe SHUKRAN WALAL WABILAHI AWFIQ